Lose Belly Fat at Home အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
ဒေါင်းလုပ် APK（19.1MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Lose Belly Fat at Home - Lose Weight Flat Stomach
တစ်နေ့လျှင် ၁၀ မိနစ်သာချွေးပါ။ ဝမ်းဗိုက်အဆီကျပြီးသင့်အိမ်ကိုကျွနု်ပ်တို့၏ တို။ ထိရောက်သော အဆီလောင်ကျွမ်းစေသည့်လေ့ကျင့်ခန်းများဖြင့်ဝမ်းဗိုက်ကိုရှူသွင်းပါ။ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်အစာအိမ်ပြားတစ်လုံးရလိမ့်မည်။
ဝမ်းဗိုက်အဆီသည်သင်၏စုပ်ကိုဖုံးအုပ်ပြီးသင်၏ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေသည်။ ၎င်းသည်မြင့်မားသောသွေးဖိအား၊ ကင်ဆာနှင့်အခြားရောဂါများဖြစ်ပွားနိုင်ခြေကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်။ အေရိုးဗစ်လေ့ကျင့်ခန်းများသည်ကယ်လိုရီကိုလောင်ကျွမ်းစေခြင်းနှင့်ဇီဝြဖစ်ပျက်ခြင်းကိုအထောက်အကူပြုကြောင်းကျွမ်းကျင်သူများကထောက်ပြခဲ့သည်။ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသောဝမ်းဗိုက်အဆီကိုဖယ်ရှားပြီးသင်၏ကျန်းမာရေးကိုမြှင့်တင်ရန်ဒီအက်ပ်ရှိအေရိုးဗစ်လေ့ကျင့်ခန်းများကိုစမ်းကြည့်ပါ။ နှင့်ပျော်စရာလမ်း။ မည်သည့်စက်ကိရိယာနှင့်နည်းပြမှမလိုအပ်ပါ။ သင်မည်သည့်အချိန်တွင်ဖြစ်စေ၊ မည်သည့်အချိန်တွင်ဖြစ်စေ၊ မည်သည့်နေရာတွင်ဖြစ်စေဖြစ်စေအိမ်တွင်း၌ဖြစ်စေလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နိုင်သည်။
ဤလေ့ကျင့်ခန်းအက်ပလီကေးရှင်း Lose Belly Fat ကိုအဘယ်ကြောင့်ရွေးချယ်သနည်း -
- ၁၀၀% အခမဲ့! လျှို့ဝှက်စွဲချက်မရွိပါ။ - အမြန်နှင့်ထိရောက်သောလေ့ကျင့်ခန်းများကအဆီများကိုလောင်ကျွမ်းစေပါသည်။
- ကိရိယာများမလိုအပ်ပါ။ ဝမ်းဗိုက်အဆီကိုလောင်ကျွမ်းပါ၊ ကိုယ်အလေးချိန်ကျပြီးခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်နှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေပါလိမ့်မည်။
- ကျွမ်းကျင်သူများကဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည့်အခက်အခဲ ၃ ခု (လွယ်ကူသော၊ အလယ်အလတ်၊ အခက်ခဲဆုံး) ၃ ခုဖြင့်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းကိုလေ့ကျင့်ပါ။ > - စတင်သင်သူနှင့်ရင်းနှီးဖော်ရွေသည်။ - သင့်ကိုယ်ပိုင်လေ့ကျင့်ခန်းလေ့ကျင့်သူနည်းတူကာတွန်းနှင့်ဗွီဒီယိုလမ်းညွှန်ချက်များ။ ။ - သင့်ကိုယ်အလေးချိန်တိုးတက်မှုကိုခြေရာခံပါ။
- လောင်ကျွမ်းသောကယ်လိုရီများကိုခြေရာခံရန်နေ့စဉ်လေ့ကျင့်ခန်း tracker ။
- စိတ်ကြိုက်လေ့ကျင့်ခန်းသတိပေးချက်များကသတိပေးသည် မင်းရဲ့အစာအိမ်ကိုလေသံထွက်အောင်လုပ်ခြင်း။ - ကျန်းမာရေးအကြံပေးချက်များသည်ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းနှင့်ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ခြင်းအတွက်မျှတသောအစာကိုစားရန်ကူညီပေးသည်။ - အစာအိမ်လေ့ကျင့်ခန်းများ၊ ဗိုက်အဆီလေ့ကျင့်ခန်းများ၊ ကောင်းမွန်သောကိန်းဂဏန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ - ဝမ်းဗိုက်အဆီကိုလောင်ကျွမ်းစေခြင်းနှင့်ဝမ်းဗိုက်ချောမွေ့စေရန်သင်၏လေ့ကျင့်ခန်းကိုနေ့စဉ် ၁၀ မိနစ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။ - Google Fit နှင့်အချက်အလက်များကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ပါ။
အသုံးမကျသောနည်းလမ်းများဖြင့်သင်၏အချိန်ကိုဖြုန်းတီးပါ။ Lose Belly Fat ကိုအခမဲ့ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ။ အဆီကိုလောင်ကျွမ်းစေခြင်း၊ ဝမ်းဗိုက်ကိုတင်းစေခြင်း၊ သငျသညျအချိန်မရွေးကမ်းခြေအဆင်သင့် abs ရပါလိမ့်မယ်!
ဗိုက်အဆီလေ့ကျင့်ခန်းကိုရှာဖွေနေ? မြန်မြန်အစာအိမ်အဆီဆုံးရှုံးချင်ပါသလား ဒီကိုယ်အလေးချိန်အက်ပလီကေးရှင်းကတာယာဗိုက်အောင့်ခြင်းကိုသက်သာစေပါတယ်။ အိမ်တွင်ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေသည့်အကောင်းဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းများရှိသည်။
အိမ်တွင်ဝမ်းဗိုက်အဆီလျော့နည်းခြင်း။ ဗိုက်အဆီလျော့နည်းစေရန်တစ်နေ့လျှင်မိနစ်အနည်းငယ်အချိန်ယူပါ။ လေ့ကျင့်ခန်းအားလုံး Ab ကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကြံ့ခိုင်ရေးနည်းပြမှဒီဇိုင်းရေးဆွဲသည်။ ဒီ app မှာအမျိုးသားများအတွက်လေ့ကျင့်ခန်းများသာမကအမျိုးသမီးများအတွက်အဓိကလေ့ကျင့်ခန်းလည်းပါရှိသည်။ ဤအရာအလုံးစုံကိုယ်ခန္ဓာအဆီလောင်ကျွမ်းခြင်းလေ့ကျင့်ခန်းအချိန်မရွေးဘယ်နေရာမှာမဆိုလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။
အမျိုးသမီးကြံ့ခိုင်ရေးလေ့ကျင့်ခန်း။ အမျိုးသမီးများအတွက်အဆီလောင်ကျွမ်းခြင်းလေ့ကျင့်ခန်းများဖြင့်သင်အဆီဆုံးရှုံးမှုကိုလျင်မြန်စွာဝမ်းချုပ်နိုင်ပြီး ၁၁ လိုင်း abs ရှိနိုင်သည်။ အိမ်၌ဗိုက်အဆီကိုလောင်ကျွမ်းရန်လေ့ကျင့်ပါ။
ဗိုက်အောင့်လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်လိုပါသလား။ အစားအစာဟာအရေးကြီးတယ်ဆိုတာသတိရပါ။ လေ့ကျင့်ခန်းရလာဒ်များများရရန်သင်အဆီလောင်ကျွမ်းခြင်းလေ့ကျင့်ခန်းများကိုကယ်လိုရီနည်းသောအစားအစာများနှင့်ပေါင်းစပ်ရန်လိုအပ်သည်။ br>
အမျိုးသားများအတွက်အဆီလောင်ကျွမ်းခြင်းလေ့ကျင့်ခန်းများ - ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းအမျိုးသားများအတွက်အပြောင်းအလဲကြီးကြီးမားမားရှိသော HIIT လေ့ကျင့်ခန်းများဖြင့်အိမ်တွင်လေ့ကျင့်ပါ။
လေ့ကျင့်ခန်းအားလုံးကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကြံ့ခိုင်ရေးနည်းပြမှဒီဇိုင်းဆွဲသည်။ ။ သင်၏အိတ်ကပ်ထဲ၌ကိုယ်ပိုင်ကြံ့ခိုင်ရေးနည်းပြရှိခြင်းကဲ့သို့လေ့ကျင့်ခန်းမှတဆင့်လေ့ကျင့်ခန်းလမ်းညွှန်!
မကြာမီလာမည့်အင်္ဂါရပ်များဖြစ်သော Fitbit, Samsung Health, MyFitnessPal နှင့်စည်းညှိခြင်းအချက်အလက်များ ...
ဘာအသစ်လဲ Lose Belly Fat at Home - Lose Weight Flat Stomach 1.4.8
Moe Ste Point
Khaw lay Myanmar